Dragon Quest: Your Story (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဒီကားက 2019 တုနျးက Netflix ကထှကျရှိခဲ့တဲ့ Anime ပဲဖွဈပါတယျ။ dragon quest ဂိမျးကို animationအနနေဲ့ရိုကျထားတာပါ။ ဇာတျလမျးအကြဥျးပွောရရငျ နညျးပညာတိုးတကျလာတဲ့နောကျမှာ လူသားတှဟောဂိမျးကို ကိုယျတိုငျဝငျရောကျပွီး ဆော့ကစားလာနိုငျတယျ။
ဒီကားထဲက ကောငျလေးက Dragon Quest ထဲကလူကာ ဇာတျကောငျနရောကနေ စှနျ့စားခနျးတှေ လုပျဆောငျသှားပုံကို စိတျလှုပျရှားဖှယျကွညျ့ရမှာပါ။ လူကာအကွောငျးကတော့ Dragon Quest ကိုထိတှခေဲ့ဖူးတဲ့ 90kids တှဆေိုရငျတော့ သိမှာပါ။
လူကာက မှေးဖှားခွငျးမှာ သူ့ရဲ့မိခငျဟာ မိစ်ဆာရဲ့ ဖမျးဆီးခွငျးကိုခံခဲ့ရပါတယျ။ သူဟာ ဖခငျရဲ့ လကျထဲမှာပဲ ကွီးပွငျးလာခဲ့ရပမေယျ့တဈနမှေ့ာတော့ ဖခငျပါ အသတျခံရတဲ့အခါ သူ့မိခငျကို ရှာဖှရေမယျ့ တာဝနျဟာသူ့ထံရောကျလာပါတော့တယျ။
ဇာတျလမျးတဈခုလုံးဟာ စိတျလှုပျရှားစရာတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနခေဲ့ပွီး အတျောလေးကိုကွညျ့လို့ကောငျးနခေဲ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အဲ့နောကျကှယျကနျြနသေေးတာကတော့ အစမှာပွောခဲ့သလိုပဲ လူသားတှဟော VR World ထဲမှာသာယာနခေဲ့ပွီး .
တကယျ့ပွငျပကမ်ယာအစဈကိုမလြေ့ော့နမှေုဟာ ကွောကျမကျဖှယျကောငျးလောကျအောငျ မိနျးမောသှားတာကိုတှရေ့မှာပါ။ အဲ့တော့ VR Game ကွိုကျနှဈသကျသူတှေ ပိုပွီးကွညျ့သငျ့တာပေါ့ဗြာ . . .
ဒီကားက 2019 တုန်းက Netflix ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Anime ပဲဖြစ်ပါတယ်။ dragon quest ဂိမ်းကို animationအနေနဲ့ရိုက်ထားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရရင် နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့နောက်မှာ လူသားတွေဟာဂိမ်းကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီး ဆော့ကစားလာနိုင်တယ်။
ဒီကားထဲက ကောင်လေးက Dragon Quest ထဲကလူကာ ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ စွန့်စားခန်းတွေ လုပ်ဆောင်သွားပုံကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရမှာပါ။ လူကာအကြောင်းကတော့ Dragon Quest ကိုထိတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ 90kids တွေဆိုရင်တော့ သိမှာပါ။
လူကာက မွေးဖွားခြင်းမှာ သူ့ရဲ့မိခင်ဟာ မိစ္ဆာရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ ဖခင်ရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ ဖခင်ပါ အသတ်ခံရတဲ့အခါ သူ့မိခင်ကို ရှာဖွေရမယ့် တာဝန်ဟာသူ့ထံရောက်လာပါတော့တယ်။
ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပြီး အတော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့နောက်ကွယ်ကျန်နေသေးတာကတော့ အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ လူသားတွေဟာ VR World ထဲမှာသာယာနေခဲ့ပြီး .
တကယ့်ပြင်ပကမ်ယာအစစ်ကိုမေ့လျော့နေမှုဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် မိန်းမောသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အဲ့တော့ VR Game ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ ပိုပြီးကြည့်သင့်တာပေါ့ဗျာ . . .
Arata Furuta Arata Iura Chikako Kaku Haru Kasumi Arimura Ken Yasuda Kendo Kobayashi Kentaro Sakaguchi Kotaro Yoshida Kouichi Yamadera Suzuki Matsuo Takayuki Yamada Takeru Satoh
Option 1 storage.msubmovie.com 484 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 484 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 484 MB SD (480p)
Option7storage.msubmovie.com 2.5 GB FHD (1080p) EAC-3 5.1
Option 8 sharer.pw 2.5 GB FHD (1080p) EAC-3 5.1
Option9yuudrive.me 2.5 GB FHD (1080p) EAC-3 5.1